Large Hollywood Efu Mirror, Tabletop ma ọ bụ Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na a 10x Magnification Mirror
Dị na agba: silver
The ọmarịcha imewe na-enye zuru okè ọbụna ìhè na magburu onwe ikpọ doo anya. Ọ bụ Ezigbo maka ntecha ngwa ke n'ụlọ ma ọ bụ ọkachamara ntọala!
Ikanam ìhè isi abụọ na agba okpomọkụ
Easily ịgbanwee n'etiti ọkụ ìhè na Ìhè
Na-ekpo ọkụ ìhè 3200K
Efu Mirror na Ìhè, Hollywood ìhè Mirror na Dimmer, Tabletop ma ọ bụ Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya efu Makeup Mgbakwasa Mirror
The mirror ka nke elu mma aluminum etiti ma osisi isi. Kenkowaputa enweghị nkebi splicing etiti na-eme ka mirror ọzọ elu-ọkwa na ndị mara mma.
Mere kpakpando ga-eji dị otú ahụ a etemeete mirror na etemeete?
Light ntule na ihu nke ìhè-ezu, ga-etolite a onyinyo, na ntecha iji hụ edo agba.
Ọdịdị mirror ka nke elu mma aluminum etiti ma osisi isi. Kenkowaputa enweghị nkebi splicing etiti na-eme ka mirror ọzọ elu-ọkwa na ndị mara mma. The kasị mma ị, kwesịrị inwe.
Soft ọkụ, ọ dịghị ntigbaa, mfe etemeete gburugburu ụdị nkesa nwere ike zuru rijuru afọ ìhè. Gosi ihe ndị kasị mma ị.
12 Ada bulbs dị na-ekpo ọkụ ìhè / ìhè nhọrọ, dimmable na ebe nchekwa ọrụ.
Ezubere maka ma tabletop na mgbidi n'ịnyịnya setups.
Smart ihuenyo mmetụ NJIDE
Pịa iji ịgbanwee ìhè isi, ogologo pịa ịgbanwe ìhè ihie
Ọ na-onwem na 1 PC kemwepu 10x magnification ntụpọ ịchọ mma mirror. mee ka gị na etemeete ọzọ nụchara anụcha.
Ihe pụrụ iche onyinye maka INYOM NA ụmụ agbọghọ
Previous: Hollywood Efu Makeup Mirror Tabletop ma ọ bụ Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na
Next: Hollywood ìhè Efu Mirror na ikanam UV Ntu, Tabletop Beauty Mirror
Light ihie: Kemeghi ihie
Style: Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na ma ọ bụ Tabletop Efu Mirror
Ụba Size: 500 * 600 * 25mm (19.69 "x23.62" x0.98 ")
Ngwugwu Size: 650 * 110 * 565mm (25.59 "x4.33" x22.24 ")
Arọ: 3.8kg / 8.38lb
Nkwakọ Type: EPE ụfụfụ + Box ngwugwu
Efu Tabletops ìhè Makeup Mirror With 9 L ...
Hollywood Efu Makeup Mirror Tabletop ma ọ bụ Wall ...
Hollywood Efu Mirror, Style Makeup Enyo w ...
Makeup Mirror With Light Bulbs , Efu Mirror With Light Bulbs, Mirror With Light Bulbs , Efu Light Bulbs ,